Kupemberera Gay Pride muWest Hollywood
History of Gay Pride in LA
Los Angeles inopemberera Gay Pride mukutanga kwaJune, kukudza izvo vazhinji vanofunga kuti ndeimwe yezviitiko zvakakosha munhoroondo yevanamadzimai nevadzidzisi vegayari: Stonewall Riots, yakaitika musi waJune 28, 1969, kuManhattan's Stonewall gay bar . Los Angeles Gay Pride yakatanga gore rakatevera pashure peChewwall, muna 1970, uye rave richikura rakasimba kubva-gore rino richava iro remakore makumi mana nemakumi mana emakore reL Pride.
Yakabudiswa naChristopher Street West, kupembererwa kunoitika muLa inonyanya kuzivikanwa nemurume, guta reWest Hollywood . Muna 2018, zviitiko zvichaitika muvhiki yaJune 9-10.
LA Kuzvikudza Preview
Mamwe mashoko pamusoro pePa Pride muna 2018 achaiswa pano sezvavanenge vaita. Panguva ino, hezvino tarisa kumashure pane zviitiko zvakapfuura:
Mutambo weR LA Pride Music unoitika musi weMugovera neSvondo mumoyo weWest Hollywood kuWest Hollywood Park (kurutivi rwekumaodzanyemba kweSan Vicente Boulevard pakati peSanta Monica Boulevard neMelrose Avenue). Iyi mutambo, iyo inodhura madhora 25 pazuva (unogona kutenga matikiti kubva kunzvimbo yepamusoro yePaulde site), inosvika mazana maviri emagariro evanhu uye vanoita zvepabonde vanoita bhizinesi, pamwe nezvimwe zvizhinji zvemashoko ezitaidzo pamatanho akasiyana-siyana. Vakuru vakuru vekare vanosanganisira Aaron Carter, Brandy, Carly Rae Jepsen, Charli XCX, Krewella, Shamir, Hailee Steinfeld, nevamwe vakawanda vanoita.
Gore reLoston Los Angeles Gay Pride Parade rinoitika musi weSvondo, musi wa11: 00 mangwanani, kutanga pakona yeSanta Monica Boulevard neCrescent Heights Boulevard, uye inomhanya kune dzimwe nzvimbo dzakavhara kumavirazuva pamwe neSanta Monica Boulevard kusvika pakona yeRobertson Boulevard.
Ndichitarisa hotera panguva yekuzvikudza?
Kune zvakawanda zvisingakwanisiki, makamuri eGBBQ anogamuchirika kuti asarudze kubva.
Ramada Plaza Hotel iri pedyo nemakwikwi akawanda kubva kune dzimwe nzvimbo dzekutengesa uye mabhizinesi ane ushamwari.
The Standard inonyatsozivikanwa neidzo yayo yakanaka-inotonhorera uye nzvimbo yepati, iyo ichave yakanyanya kufambidzana munguva yeLa Pride.
San Vicente Bungalows iri nechepamusoro pakona kubva kumahombekombe akawanda, asi hoteli-iyo inenge ichangobva kugadziriswa uye kugadzirwa kwemukati yekugadzirisa-inonzwa kusununguka, ine gungwa rakanyarara.
Los Angeles Gay Resources
Iwe unogona kuvimba nezvokuti vazhinji vanoita gay, pamwe chete nemasitadhi anozivikanwa nevarume-gay , mafiripu , uye mabhizinesi, vane zviitiko zvakakosha uye mapato muWeed Week Week. Tarisa mapepa emunharaunda emunharaunda, zvakadai seChede LA uye Lesbian News kuti uwane mamwe mashoko. Uyezve tarisa pane imwe nzvimbo yakanakisisa yeLGBBQ site yakabudiswa nehurumende yehurumende yezvekushanyirwa, yeWest Hollywood CVB, pamwe chete neGay LA guide, yakagadzirwa neLos Angeles Tourism & Convention Board.
Iwe uchawana zvakawanda zvakawanda pamusoro penharaunda yeWest Hollywood Gay Guide , zvakare.
Long Beach 4th of July Mhemberero
Zuva reSt. Patrick muLos Angeles
Pamusoro peDowntown Long Beach Nightclub neBhari
Top 10 Zvinhu Zvokuita muWest Hollywood
Zvinhu Zvimwe Zvingaitwa MuL
Ndekupi Kuve neZuva Rokuzvarwa Zuva muKansas City (Peji 2)
Mhuri dzekugara muCatskills yeNew York
The 9 Best Cincinnati Hotels of 2018
Brookside Neighborhood Zvidimbu
Tropical Island Getaways Iyo Haisati Ida Pasipoti YomuU.S.
Kwamunoenda Ice Skating muKansas City Area
Kuronga Musikana Anopinda muLas Vegas
Ganesh Mifananidzo: 31 Inoshamisa Mifananidzo yeGanesh Festival yeIndia